NAB faafinta wararka by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Producer of NAB Show LIVE - Page 10 - NAB Show News: Warbaahinta, TV & Raadiyaha tiknoolajiyada iyo Warshadaha soo saarista boostada. Soo-saaraha NAB LIVE
Bolero S ayaa xaqiijiyay xiriirka garsoore ee garsooraha ee Bundesliga ee Jarmalka
WUPPERTAL / FRANKFURT Jarmalka - Oct. 18, 2018 - Maanta dhacdooyinka isboortiga oo ballaadhan, iyo sidoo kale shuruudaha farsamo ee farsamada, ayaa ku sii kordhaya qadar xasaasi ah. Si loo daboolo lana dhaafo shuruudahaan, Riedel Communications waxay bilowday qaybta Adeegyada Isboortiga Isboortiga, oo ay ka kooban yihiin teknoolajiyad qaas ah oo lagu duubay kormeer iyo taageero ballaadhan oo ay sameeyeen injineeriyiin u qalma Riedel. Kuwa ugu horreeya ee ka faa'iideysta adeegyadan waa DFL Deutsche Fußball Liga, oo xiriir la leh Riedel si loo abuuro kaabayaal la isku haleyn karo oo loogu talagalay xiriirka garsooraha ee Jarmalka Bundesliga. Iyada oo nidaamka intercom wireless ee Bolero, oo lagu soo bandhigay 2017, Riedel wuxuu leeyahay karti isku xirnaanta ku haboon oo leh tayada maqalka ee aadka u fiican in ...
Nidaamyada TVU waxay taageertaa soo saarka cusub ee ka baxsan ee Waaxda Gaadiidka ee Moscow
BARCELONA, SPAIN - Oktoobar 16, 2018 - Shabakadaha TVU, Tiknoolajiyada caalamiga ah iyo hoggaamiyaha casriga ah ee xalalka IP-yada ah ee fiidiyoowga ah, ayaa waxaa doortay Waaxda Gaadiidka ee Moscow si ay u gudbiyaan joornaal cusub si ay u calaamadiso shirkii 8aad ee Urban Urban 2018, oo la qabto July. Nidaamka TVU Networks ayaa loo isticmaalay in lagu fududeeyo wareysiyada nool ee lala yeesho saraakiisha dawladda laba goobood, oo ka socota istuudiyaha goobta ku yaala goobta jimicsiga ee Park Zaryadye oo u dhow Kremlin iyo Red Square, iyo ka soo wareegtada gawaarida madaarka madaarka Moscow, 84m ee dhulka hoostiisa. Wadar ahaan, siddeed saacadood oo ka kooban yahay ...
Dhar-dharka ayaa abuuraya Bandhiga Bandhiga ah ee NFL ee "Kyle Brandt Football Experience"
Naqshadeynta naqshadeynta iyo dimoqraadiyadeed Dhawaan ayaa dhawaan samaysay bandhiga bandhig cusub "Kyle Brandt Football Experience" ee NFL Network. Sida laga soo xigtay dharka, Kyle Brandt wuxuu ahaa fanaankii hore ee "The George Michael Sports Machine" CGI wuxuu furan yahay oo uu doonayay wax la mid ah sida muuqaalkiisa. Iyadoo lala kaashanayo kooxda NFL Network, Dharku wuxuu sahamiyey sawirada cayaaraha epic iyo gawaarida midab madow ee 'late 80s iyo' 90s si ay u horumariyaan gabal. Kooxdu waxay ku soo degtay dibadbax ballaaran oo muujinaya barnaamijka luuqada ee casriga ah oo leh casriga casriga ah ee u dhexeeya "Miami Vice", Art Deco, iyo "Tron." Si aad u aragto ...
Falanqaynta Isgaadhsiinta Ku Dhexdhexaadinta Istaraatiijiyada Dhaqanka iyo Hannaanka Socdaalka ee CAPER2018
Khubarada Xidhiidhka Isgaarsiinta ayaa ku biiri doona Viditec (Istoodhka # I-17) si ay u muujiyaan habab wax ku ool ah oo ku saabsan naqshadaynta taas oo u sahlaysa shirkadaha warbaahineed si loo shakhsiyo habka iyo xawaaraha ay u gudubtaan dhismooyinka jiilka xiga. "Ururada warbaahineed ee yar ayaa leh raaxo ah goobta goobta cagaaran iyo miisaaniyad xadidan, ama dulqaad loo dulqaadan karo bangiga tiknoolajiyada aan dhammeystirnayn," ayuu yiri Imagine Communications 'Sergio Yáñez, Madaxweyne Ku-Xigeenka, CALA Sales. "Waxay raadinayaan wax-qabad wax ku ool ah oo la tijaabiyey oo ka caawinaya inay maal-gashadaan ganacsigooda oo ay bixiyaan waddo si sahlan loogu socdo ...
Isticmaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Zegami wuxuu bilaabayaa Suuqa Warbaahinta
Jaamacadda Oxford University waxay ka faa'iideysataa awoodda AI iyo bini'aadamka dadka iyada oo loo marayo wadiiqada xogta gaarka ah ee muuqata oo ballanqaadaysa go'aanno wax ku ool ah oo ku saabsan tayada iyo content, iyo kaqaybgalayaasha xoogan ee dhagaystayaasha [Oxford, United Kingdom, October 16, 2018] - Zegami, wuxuu isku daraa warbaahinta digital, xogta iyo sirta farsamooyinka (AI) ee loo yaqaan 'cloud-based cloud-based' si ay si dhakhso ah u soo saaraan macluumaad qiimo leh iyo aqoonsiga qaababka gudahiisa, waxay u bilaabayaan warbaahinta. Horey saameyn ugu yeelatey qaybaha sida isboortiyada, tafaariiqda iyo tiknoolajiyada cilmi baarista, tiknoolajiyada sahaminta awoodda leh ee Zegami, oo ka bilowday adduunka daawada molecular, waa ...
Captionmax u gudbinta Starfish sharaxaadda dhawaaqa codka
Tiknoolajiyadda, Starfish Technologies, oo ah tii ugu horeysay ee tiknoolajiyada dhawaaqa sawirada (Video Description), ayaa maanta shaaca ka qaaday in Captionmax, mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee adeegga warbaahinta ee buuxa ee waqooyiga America ayaa iibsaday loona hirgeliyay liisamo badan oo loogu talagalay Starfish Advantage Audio Description qalabka shaqada iyo qalabka wax lagu shaqeeyo ee maqalka ah. Gadiidku waa horumar aad u weyn xagga suuqa North American ee Starfish, oo ku salaysan horumarinta wax soo saarka ee u suurtageliya inay faa'iido u yeeshaan inay si toos ah ula qabsadaan shakhsiyaadka iyo farsamooyinka kale ee farsamooyinka ah ee gaarka u ah suuqa Maraykanka. Intaa waxaa dheer, shirkadaha ayaa ka wada shaqeyn doona horumarinta mustaqbalka, sifooyinka ganacsi ahaan u adeegsan kara kuwaas oo ka faa'iideysan doona macaamiisha hadda iyo mustaqbalka ...
V-Nova wuxuu maalgashiga maalgashiga maalgashiga ka helay Novator Partners
• Guddoomiye kuxigeenka Thor Björgólfsson wuxuu ku biiraa guddiga maamulka V-Nova. • Casriyeynta faylasha waxaa ka mid ah dhowr shirkadood oo waaweyn oo ka mid ah Play (Poland), WOM (Chile) iyo Nova (Iceland). • Maalgashiga wuxuu xoojiyaa oo wuxuu ballaariyaa joogitaanka suuqyada ee xalinta cadaadiska PERSEUS. Si gaar ah ayaa loo qabtey V-Nova Limited, oo ah shirkad horudhac ah oo ku saabsan xalinta fiidiyowga, maanta ayaa ku dhawaaqday in ay hubisay maalgashi lacageed oo badan oo miisaaniyad ah si kor loogu qaado koboca ganacsiga. Shirkadda cusbitaallada casriga ah ayaa ballaarin doonta kooxdeeda cilmi baarista iyo horumarinta si ay u sii xoojiso codsigeeda PERSEUS ee codsiyada ka jirta qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo ballaarinta hawlahooda ganacsi caalami ahaan si ay u sii xoojiyaan gelitaanka suuqa. ...
M & E Evolution wuxuu ka caawinayaa dhammaan Sawirada Sawirada Muuqaalka
"Cunto ha ii cunin markaan noloshayda badbaadiyo!" - D'Leh, "10,000 BC," Warner Bros., 2008 Dhawaan, waxaan BBC-da ku akhriyay waxyaalahan yar ee fossilized (deuterostome) oo ku saabsan xajmiga hadhuudhka kaas oo laga helay bartamaha China, oo waa aabaha xNUMX-million-sano jir ah adiga iyo aniga - tinyurl.com/gpo540sxk. Dabeecad yar yar 'shukulaato' inta badan heerarka ugu badan; laakiin wax alla wixii ku dhowaa, waxay u egtahay sida caadiga ah. Waxaa jira kala duwanaansho isaga (ama iyada) weli hareeraha. Waxaa iga dhigay inaan u malaynayo in horumar waa dhan oo nagu wareegsan, gaar ahaan M & E ...
Harmonic Leads ah Dalladda loogu talagalay Cabirka Farsamada Cabirka iyo Video Streaming at SCTE Cable-Tec Expo
17, 2018 - Harmonic (NASDAQ: HLIT) ayaa maanta ku dhawaaqday in ay muujinayso soo bandhigyo cusub oo cusub oo ku salaysan helitaanka fiilooyinka loo adeegsado fiilooyinka loo yaqaan cable-tec Expo, Oct. 22-25, ee Atlanta . Xeeladaha software-dhexe ee Harmonic ayaa awood u siinaya jiilka xiga ee adeegyada IP-ku-saleysan, oo ay ku jiraan internetka gigabit ee la qaadi karo iyo muuqaal tayo leh oo tayo sare leh. "Kordhinta tartanka ka yimid adeeg bixiyayaasha OTT iyo isbeddelka dabeecadaha macaamiisha ayaa abuuray caqabad iyo fursado loogu talogalay shirkadaha taleefannada caalamiga ah," ayuu yiri Nimrod Ben-Natan, oo ah madaxweyne ku xigeenka sare iyo madaxa guud ee Cable Access Business. "Macaamiilayaashu maanta waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo ficil ah, yareynaya kharashaadka inta la keenayo ...
NEP Group Qaadasho SIS LIVE
NEP Group, oo ah wada-shaqeeyn farsamo oo caalami ah oo kobcaya oo taageersan soo saarayaasha wax soo saarka ee cayaaraha isboortiga iyo madadaalada, ayaa maanta lagu dhawaaqay iibsashada SIS LIVE Limited, oo ah bixiye bixiya adeegyo isku xirnaanta iyo kabin ah Adeegyada Macluumaadka Isboortiga ee UK ("SIS"). Soo iibsigu wuxuu dhammeystiraa shirkadaha NEP ee adeegga warbaahinta iyo warbaahinta saxaafadeed, xoojinta taageerada shirkadda ee ciyaaraha isboortiga, macaamiilyada iyo madadaalada ee UK, Europe iyo adduunka. Isku darka wuxuu sidoo kale waafaqsan yahay istaraatiijiyadda NEP ee lagu xoojinayo qaybta warbaahinta, iyo awoodaha isku xirnaanta ayaa muhiim u ah NEP siinta adeeg buuxa oo ah adeegyo maareysan oo awood u leh macaamiisha NEP ...
Pitt Athletic, NEP Koox Shirkadeed; Waxay bilaabeysaa Pitt Studios
Pitt Athletic iyo Jaamacadda Pittsburgh, oo kaashaneysa NEP Group, ayaa soo bandhigaysa Pitt Studios Khamiista, Oktoobar, Oct. 4 oo leh munaasabadda jaridda jaridda, safarka iyo wareega warbaahinta ee Xarunta Dhacdooyinka Petersen. "Waan ku faraxsannahay inaan soo bandhigno Pitt Studios," ayuu yiri Agaasimaha Athletic Heather Lyke. "Tani waxay aheyd iskaashi wanaagsan oo u dhexeeya waaxda isboortiska, jaamacada iyo NEP Group. Iyada oo khibrada iyo caawimaadda NEP, Pitt si wanaagsan ayaa loogu diyaariyay soo saarida ACC Network oo leh xarun goboleed oo heer sare ah oo ka mid ah kuwa ugu fiican dalka. "Pitt Athletics ayaa been abuurtay ...
Dielectric Reaches Market-Leading 500th Spectrum Lacagta Lacagta ugu Dhaca
KSHV-DT ee Shreveport wuxuu amar ku bixiyay adeegga loo yaqaan 'UHF antenna' oo loogu talagalay in lagu magacaabo "UHF Channel" 16 ee cusub RAYMOND, Maine, Oktoobar 17, 2018 - ee geeddi-socodka dib-u-celinta badan. Xarunta Warbaahinta ee Nexstar KSHV-DT, oo u adeegta Shreveport, Suuqa LA, waxay ku rakibaysaa anteenada wareegga koowaad ee 500 si ay ula socdaan wajiga 2019 ee jadwalka ku-meel-gaadhka ee FCC. Dielectric's 2th aargoynta antenna waa TALA-P500-4 / 4H-10 SM balaadhanka, dhinaca sare, qalabka gargaarka ah ee saldhigga u adeegsanaya labadaba UHF-da hawsha kan hadda iyo mustaqbalka. Qalabka Dielectric-wuxuu u qaabeeyay anteenaha si ay u faafiyaan qaab gaar ah, habdhaqan, lafo-qaabeeya si loo yareeyo caynsanaanta gobollada Shreveport iyo Texarkana. KSHV ayaa si aan kala go 'lahayn uga gudubtay UHF Channel 1 si ay ...
Isgaarsiinta Isgaadhsiinta Awoodda Qalabka Triathlon Caymiska IP Streaming iyo Isku-xirka Jidhka
Isticmaalka khibrada moobiilka ee Mobile Viewpoint ayaa fududeeyay adeegsiga xawaaraha isticmaalka iyo tayada lixda dhacdooyinka qiimaha kharashka ku baxaya ee New York, NY, Oktoobar 17, 2018 - CP Isgaarsiinta, hogaamiye xalal cusub iyo adeegyo wax soo saarka munaasibka ah, awood buuxda oo ah IP-socodka iyo isku xirnaanta shabakadda gacanta oo loogu talagalay wax soosaarka cayaaraha ee kuyaala 2018 Subaru IRONMAN Mont-Tremblant, oo ah dhacdo tayo-xirfadeed ah oo lagu soo bandhigay Facebook Live. Nidaamka guud ee IP iyo moobi socodka ayaa isu keenay mashruuca Mobile Viewpoint iyo nidaamyada isgaarsiinta ee CP Communications 'oo dhawaan la bilaabay qaybta casriga ee casriga ah si ay u hirgeliso oo ay u soo bandhigto qalabka kamaradaha nool lixda ...
Cablecast Community Media Platform Version 6.5 Waxay hagaajineysaa waayo aragnimo internetka iyo aragtiyo
Qalabka korodhka ah iyo gaarsiinta qiyaasta yaraanta waxay hagaajineysaa tayada VOD, halka qalabka cabbiraada cusub iyo falanqaynta cusub ay ka caawiyaan wariyeyaashu inay si fiican u fahmaan dhagaystayaashooda internetka MINNEAPOLIS, MINNESOTA, OCTOBER 17, 2018 - Hot on cirifka sii deynta Cablecast Screenweave si loogu soo bandhigo nuxurka TV-ga bulshada Aaladaha OTT, Nidaamka Warbaahinta Tightrope ayaa soo bandhigay barnaamijka 6.5 ee barnaamijka Warbaahinta Bulshada Cablecast. Waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo barnaamijyada PEG inay hagaajiyaan waayo-aragnimadooda internetka, cusbooneysiinta cusub waxay sare u qaadeysaa tayada VOD clips iyadoo la siinayo qalab cusub si ay uga caawiso dadka isticmaala inay cabbiraan saameynta ay ka kooban tahay internetka. Waxaa ugu muhiimsan ka mid ah qalabeynta ...
Isgaadhsiinta CP waxay soo dhoweeyeen Warshadlaha Warshadaha Ken Dillard oo ah Madaxa Waddanka Maraykanka ee North America
Waxay ka faa'iideysan doontaa waayo-aragnimada wargeysyada gacanta si ay ugu faaiidaystaan ​​iskaashiga IP-ga bixiyaha Mobile View; (N910) New York, NY, October 17, 2018 - CP Communications, hogaamiye xalal cusub oo adeegyo loogu talagalay wax soosaarka munaasabadaha nololeed ee adag, ayaa magacaabay weriye 30 sanadka oo lagu magacaabo Ken Dillard Madaxweyne kuxigeenka Sales North American Sales. Kalluumaysiga khibradihiisa ugu weyn ee wargeysyada gacanta, Dillard ayaa ah qorshaha ugu horreeya ee istaraatiijiga ah ee lagu dhisayo wada-shaqeeynta gaarka ah ee u dhaxeeya CP-ga iyo IP gudbiyaha xalinta gaadiidka IP
Nathaniel Méchaly oo ah muusigga ugu wanaagsan Faransiiska Faransiiska ayaa dooranaya kormeerka PMC ee Studio Studio
Faransiis Faransiis ah Nathaniel Méchaly ayaa ku rakibay labadii PMC IB2S XBD-A oo ku yaala istuudiyaha gaarka ah ee Paris, taas oo ka soo xigatay taxadarka iyo furfurnaanta codkooda sababta oo ah sababaha ugu muhiimsan ee loo dooranayo nidaamkan. Munaasabada ugu caansan oo lagu magacaabo "The Trilogy" oo lagu magacaabo Liam Neeson, Méchaly wuxuu bilaabay xirfadkiisa muusigga tifaftirka iyo bandhigyada ka hor inta uusan u wareegin adduunka filimka. Liiska liiska credits sidoo kale waxaa ka mid ah The Black Box, Revolver, Secret, Room of Death, Dorothy Mills, Columbiana iyo Angélique. 2013, Méchaly, oo leh heesaha reer Japan Shigery Umebayashi, wuxuu ku guuleystay Score Best Original Film ...
Prof. Darren Bramley iyo Ken Cavali Embrace New flowtech100
BURY ST. Daawo Sawirada: Darren Bramley iyo Ken Cavalli ayaa soo dhaweeyay qorshaha cusub ee 17 ka dib markii baaritaan lagu sameeyey soodhaweynta baahida warbaahin elektaroonig ah (ENG) iyo jawi warbaahineed. Socodka ugu dhakhsaha badan ee adduunka, flowtech2018 wuxuu ku waafaqsan yahay dhammaan hannaanka dareeraha 100mm waxana uu taageeri karaa mushaharka ilaa kilo (100 kilograms), taasoo ka dhigeysa mid ku habboon wax soo saarka culus ee ENG. Hadda waxaa laga helaa qaaliyaal la oggol yahay, flowtech100 waa wada-shaqeynta ugu dambaysa ee laga helo magaca Sachtler iyo Vinten. Shirkadda cusub waxay ku salaysan tahay teknooloojiyada khaaska ah ee kaarboon-fiber-ka taasoo ka dhigaysa flowtech30 aad u xoog badan oo khafiif ah.
IHSE waxay soo bandhigaysaa Laba Xuduud ah KVM kala-beddelashada Xalalka HDMI 481
RANBURY, NJ - Oktoobar 17, 2018 - Wax ka qabashada baahida suuqyada ee xaaladaha amniga ee kordhinta marka la isku xiro kombiyuutarada kala duwan ee hal xarun shaqeed, IHSE waxay hadda bixisaa xal laba jibbaar ah oo ah KVM beddelidda isku xirka fogaanta fogaanta u dhexaysa ilaha kombiyuutarka iyo xarumaha isticmaalaha. 2 1 481 cusub ayaa suurtagal ah in la lafaguro kombiyuutarro kala duwan ama server oo hal miis ah adigoo isticmaalaya kumbuyuutar, mouse, iyo bandhig. Waad ku mahadsantihiin shirkadda ay ku guulaysatay abaalmarinta 'Draco vario' ee xayaysiinta XNUMX ee loogu talagalay HDMI, calaamadaha waxaa lagu wadaagi karaa meelo fog oo ka baxsan hal fiyuus ah ama isku xirka Cat-X oo leh tayada muuqaalka iyo muuqaalka naafanimada. Tani ...
Page 10 of 856«First...«89101112»203040...Last »
Qodobka Archives Select Month November 2018 (221) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) May 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) May 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) May 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) May 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) May 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) May 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)